ပစိဖိတ်အနောက်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းများ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
November 23, 2009 — mmweather
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 26W (Twenty six) – သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ရောက်လာနိုင်ကြောင်း TSR နှင့် JTWC ခန့်မှန်းချက်များတွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ လတ်တလောအချိန်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်၌ရှိနေသော 26W သည် လာမည့် ၁၂ နာရီအတွင်း အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာကာ၊ လာမည့် ၇၂ နာရီအတွင်း အဆင့်-၁ (CAT-1) သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
လာမည့် နာရီ ၁၂ဝ (နိုဝင်ဘာလ – ၂၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီ – 00:00 UTC) တွင် အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ လာနိုင်ပြီး မြောက်-အနောက်မြောက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည် ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် ၆၃၅ မိုင်ခန့်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေပြီး မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိကြောင်း ၊ နောက်ထပ် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုသည် စင်္ကာပူနိုင်ငံ အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက် ၂၉၅ မိုင်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေပြီး၊ မုန်တိုင်းတစ်ခု အဖြစ် သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ချေ အသင့်အတင့် ရှိနေကြောင်း JTWC ခန့်မှန်းချက်များအရ သိရပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 26W, tropical-depression, weather. 1 Comment »
One Response to “ပစိဖိတ်အနောက်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းများ”
Tropical Depression 26-W was upgraded toatropical storm at 7pm Monday evening.
Tropical Depression 26-W was upgraded toatropical storm at 7pm Monday evening. The storm is located about 390 miles to the south-southeast of Guam and continues to move onanorthwest track at7miles per hour with maximum sustained winds of 40 MPH near its center.
The National Weather Service predicts the system to move closer toward the Marianas over the next couple of days, bringing the center of the storm about 160 miles southeast of Guam Wednesday evening. Weather officials say 26-W is expected to bring more than locally heavy rain and gusty winds to the Marianas.
Meanwhile,aHigh Surf Advisory is in effect for the Marianas as swells generated by 26-W is expected to produce hazardous surf conditions andahigh risk of rip currents through Friday morning.
« ကပ္ပလီပင်လယ်အတွင်း ၆.၂ အင်အားရှိမြေငလျှင်လှုပ်